Forum serasera malagasy HO an'ireo mpianatra malagasy hikiasa ho akaty ivelany- mahaiza mifidy toerana ihany fa maro ireo malagasy manenina avy eo. Ireto ny torohevitro - Dinika forum.serasera.org
HO an'ireo mpianatra malagasy hikiasa ho akaty ivelany- mahaiza mifidy toerana ihany fa maro ireo malagasy manenina avy eo. Ireto ny torohevitro
Fitohizan'ny hafatra : HO an'ireo mpianatra malagasy hikiasa ho akaty ivelany- mahaiza mifidy toerana ihany fa maro ireo malagasy manenina avy eo. Ireto ny torohevitro
harisoa32 - 06/05/2019 05:52
randrianandrasana - 06/05/2019 09:45
Tsara ny fivoarana sy ny faniriana te ho tafita fa hafa ihany ny firenen'ny tena e. Ny tenako zao efa tany Africa Atsimo, firenena anisan'ny manan-karena indrindra eto Afrika fa eee, aleo ihany any Dago.